Fotoana famakiana: 4 minitra(Last Nohavaozina: 26/09/2020)
Mety tsy te-hino fa ireo fahoriana mety hitranga aminao, fa tokony ho vonona ny mety ho izay, na ny havan-tiana, dia mitaky fitsaboana raha mbola lavitra ny an-trano. Na dia toy ny tsotra toy ny chipping ny nify, spraining ny kitrokeliny, midina amin'ny tazo na manana aretim-po, mandray ny fitsaboana tokony Mba tsy ho tahaka mora tahaka ny dia ho any amin'ny United States.
Raha mila fanazavana fanampiny momba ny fitsaboana Travel fiantohana sy ny antony tokony hieritreritra momba ny fahazoana azy io, jereo ny mpitari-dalana ao ambany.
• fitsaboana Travel fiantohana mitovy amin'ny fitsipika voalohany indrindra Travel fiantohana ny politika ao fa tsy manome fandrakofana ny vola lany mikasika ny hanafoanana, fanemorana na hanelingelina.
• Ireo politika matetika manome fandrakofana Fa inona moa amin'ny ankapobeny heverina fototra ara-pitsaboana fandaniana. Anisan'izany ny mitsidika efitra vonjy taitra, famoahana asa sy ny fitaterana vola nanameloka hanatratra ny mety pitsaboana.
Tianao ve mba hiraketana ny bilaogy lahatsoratra “Mahavariana Indrindra Oniversite In Eoropa” tao amin'ny toerana? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome voninahitra fotsiny amin'ny rohy amin'ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fthe-need-for-travel-medical-insurance%2F- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)